Xakamaynta tayada - Xuzhou Wanda Slewing Bearing Co., Ltd.
Diirada saar tayada oo si buuxda u hirgeli TQM iyadoo la raacayo dalabaadka macaamiishaSida meesha laga bilaabo iyo meesha loo socdo, Laga soo bilaabo afarta heer ee "tayadawacyigelinta mas'uuliyadda, tayada shaqada, tayada jireed ee alaabta,tayada hawlgalka nidaamka maamulka tayada" dhamaystiran iyohabka buuxa ee xakamaynta waxtarka leh, hagaajinta joogtada ah ee alaabtatayada, hagaajinta qanacsanaanta macaamiisha
1.Walaxda ceeriin ah ee alaab-qeybiyeyaal lagu kalsoonaan karo oo la ansixiyay;
Habka 2.Production waa mid si adag u waafaqsan ISO9001 Nidaamka Maareynta Tayada.
3.Strict in-process-ka ilaalinta tayada iyo 100% la dhammeeyey kormeerka alaabta ka hor dhalmada;
4.Kormeerinta alaabta dhinac saddexaad waa la aqbali karaa codsiga macaamiisha.
5.Adoption ee habka naqshadaynta alaabta caadiga ah iyo APQP, PPAP, FEMA ee falanqaynta codsiga.
Waxaan ilaalinaa mabda'a ka-hortagga marka hore iyo horumarinta joogtada ah waxaanan u soo dhoofinay KPI ilaalinta tayada alaabta.Over shantii sano ee la soo dhaafay, heerka kaadhka baadhista alaabtayadu waa in ka badan 99.5%.Heerka jawaabta macaamiisha saddexdii sano ee la soo dhaafay waxay ka yar tahay 0.05%.Tayada wax soo saarka oo aad u saraysa iyo adeeg heer sare ah ayay macaamiishu ku amaaneen dal iyo dibadba.
Habka baaritaanka tayada alaabta sayniska
Waxaan sameyneynaa xakameynta tayada guud laga bilaabo alaabta ceeriin ilaa badeecada ugu dambeysa, Nidaam kasta waxaa kormeeri doona kormeerayaal gaar ah oo wata dhammaan noocyada qalabka wax lagu ogaado iyo dhammaan hababka baaritaanka.
Lakabka jeexan ee daawaynta kulaylka ee Raceway & Gear
Kormeerka dillaaca ee jidka orodka
Mashiinka dhalaalaynta biraha
Trilinear wuxuu isku xiraa qalabka cabbiraadda
Mashiinka tijaabinta jilicsanaanta